Guddoomiyaashii Gedo ee la saftay DF oo wasiiro kula kulmay Muqdisho, Sawirro:- – Hornafrik Media Network
Guddoomiyaashii Gedo ee la saftay DF oo wasiiro kula kulmay Muqdisho, Sawirro:-
Wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan iskugu jiray soo dhaweyn iyo is xog wareysi waxay magaalada Muqdisho ugu sameeyeen qaar ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Gedo ee koonfurta dalka.
Guddoomiyaasha degmooyinka kala ah, Baardheere, Luuq, Dolow iyo Beled-Xaawo, oo dhamaantood ka tirsan gobolka Gedo, ayaa dhawaan soo gaaray magaalada Muqdisho, waxayna sii joogi doonaan maalmo sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah wasiirradii ay maanta la kulmeen.
Guddoomiyeyaashan ayaa dhowaan ka goostay maamulka Jubaland, kuna biiray dowladda Soomaaliya, waxaana kaidb xilalkii ka qaaday Jubaland.
Gobolka Gedo oo mid ah gobolada uu ka arrimiyo maamulka Jubbaland ayaa waxaa mudooyinkii danbe ka taagnaa loolan siyaasadeed oo u dhaxeeya dowladda federaalka iyo maamulka madaxweyne Axmed Madoobe.
Guddoomiyaasha maanta kulanka la qaatay wasiirada ka tirsan xukuumadda ayaa waxaa horay xilalkii uga qaaday hoggaanka maamulka Jubbaland kadib markii ay ka hor yimaadeen maamulka madaxweyne Axmed Madoobe, waxayna haatan si toos ah ula shaqeeyaan dowladda dhexe.
F91a1069 5778 44bf B588 B4358fb077de
Jubbaland oo xilalkii ka xayuubisay masuuliyiin hor leh oo ka tirsan maamulka G/Gedo
Weerar caawa ka dhacay saldhig ku yaalla waqooyiga magaalada Gaalkacyo